China sy ny orinasa mpamokatra tombo-kase mampiditra afo Weicheng
Anaran'ny vokatra Tombo-kase tsy misy afo mirehitra
Tombontsoa momba ny vokatra Mivelatra in-5 mahery ny afo, manana fahaleovan-tena sy miraikitra tsara ary mamorona rafitra tambajotra matevina aorian'ny fandoroana azy; afaka misoroka tsara ny famindrana ny afo sy ny hafanana izy io; haingam-pandeha avo lenta, fananganana mety
Sehatra fampiharana 1. Famehezana ny vaky ny gorodona vita amin'ny gorodona, ny rindrina, ny fantson-mekanika, ny fantson-drivotra, ny fantsom-panafody mafana, sns. 2. Birao firakotra tsy misy afo hametahana banga; tonon-taolana eo anelanelan'ny tampon'ny rindrina sy ny takelaka gorodona; 3. Pants plastika (≤50mm) ny banga amin'ny fidirana; ny banga amin'ny fidirana amin'ny fantsona HVAC
Amin'ny ankapobeny, ny tombo-kase amin'ny afo dia voasedra amin'ny fomba mitsangana. Raha ny vokatry ny fitsapana dia azo zaraina ho FV-0, Fv-1 ary Fv-2 hatrany ambony ka hatrany ambany. Ampiasaina indrindra amin'ny famehezana ny firafitry ny rindrin'ny lamba firakotra, ary mila ny fahaizan'ny deformation anti-famindran-toerana sy ny fisorohana ny afo sy ny setroka, ny acrylic acrylic acid-proof sealant dia mifanaraka amin'ny karazana basy. Ny fehezan-kevitry ny tombo-kase famaritana afo dia karazana fitaovana fanamafisam-peo plastika polymer ho an'ny plugging, izay misy ny tombo-kase roa sy ny famehezana afo, ary mety amin'ny fananganana afo-porofo. Ny sehatry ny fananganana dia misy fantsom-by, fantsom-pitrandrahana hafanana ary fitambaran-trano. Ireo kofehy vita amin'ny adhesive ampiasaina amin'ny vavahady misy porofon'ny afo-tombo-kase tombo-kase dia tsy afaka mahafeno ireo fepetra takiana amin'ny afo, jereo tsara fa tsy misy teboka fotsy misy akora tsy mirehitra amin'ny fehikibo. Raha mampiasa jiro ianao mba hanazavana azy ireo, inona koa, raha tsy mametraka fantsom-pametahana fotsiny ianao, dia voakitika mafy ny fisorohana ny afo sy ny fisokafan'ny setroka ny varavaran'ny afo vy.
Previous: Lamba firakotra
Manaraka: Fitaovana fampidirana organika azo ovaina amin'ny famehezana fireproof tsy azo ovaina